‘मलाई यो रोग लागेपछि श्रीमतीले छोरा बोकेर माईत जान्छु भन्दै साथ छाडी, भाईले पनि मरिस भने किरिया गरिदिन्छु भन्छ’ रुँदै श्यामले सुनाए आफ्नो पिडा (भिडियोसहित) – Wow Sansar
December 29, 2020 208
नुवाकोट । नुवाकोट शिवपुरी घर भएका श्याम तामांगको पेट झट्ट हेर्दा कुनै गर्भवती महिलाको जस्तै देखिन्छ । वर्षले जम्मा २९ लागेका श्यामको ज्यान फुकेर अनि हातखुट्टा सुकेर लौरी जस्तै भएको छ । छाला र हड्डी मात्रै भएका श्यामको छातिका करंगहरु मज्जैले गन्न सकिन्छ । बोल्दा बोल्दै बोली फुटेर रुन खोज्ने श्यामको दुःख साँच्चै नै भयानक छ ।
यस्तो अवस्थामा सबैको माया र साथ पाउनु पर्नेमा सबैले एकैचोटी साथ छाडी दिंदाको पिडा कस्तो हुन्छ होला ? यो प्रश्नको जवाफ श्यामबाट गतिलैगरि पाउन सकिन्छ । श्यामको उपचार उनको आर्थिक अवस्थाका कारण सम्भव छैन । उनी एक २९ वर्षीय युवा हुन् । तर उनलाई लागेको रोगको कराण भने उनी देखिंदा निकै उमेर भएका जस्ता देखिन्छन् । श्याम अहिले बिरामी भएदेखि उनको साथी नै उनको आफ्नै ओच्छ्यान मात्र छ । उनको रोग भनेको एक्कासी बढेको उनको पेट हो ।
उनको पेट गएको अषाढको महिनादेखि अचानक बढ्न थालेपछि उनलाई माया ममता दिएर ख्याल राख्नु पर्ने श्रीमतीले पनि छाडेर गएको कुरा श्यामले सुनाए । उनले भने,‘माईत जान्छु भनेर छोरा बोकेर गएकी थिई फर्किएर आएकी छैन । न त फोन नै गरेकी छ ।’ श्यामको भनाई अनुसार उनी घरको जेठो छोरा रहेछन् । उनलाई यो अवस्थामा उनका भाईहरुले हेर्नु पर्ने हो तर भाईले पनि कहिले मर्ला भनेर दिन गनेको उनी बताउँछन् ।
सबैले बलेको आगो मात्र ताप्न रुचाउँछन् भन्ने कुरा श्यामको यो अवस्था देखेर पनि उनलाई रखेदेख गर्न नचाहाने उनका आफन्तहरुको व्यवहार देखेर भन्न सकिन्छ । भएको भाईले पनि मरिस् भने किरिया गरिदिउँला भनेर गयो भन्दै श्याम भक्कानिए । यति मात्र नभई कहिले काँही यसो वरपर उभिंदा चिनेजानेकाहरुले कति महिनाको भयो ? भन्दै जिस्काएको कुरा पनि उनले दुखि हुँदै सुनाए । कसैले आफ्नो उपचार गरिदिओस् भन्ने अपेक्षामा रहेका श्याम भन्छन्………भिडियोसहित
Prevनाक लामो भएर नराम्री भएँ भन्दै नाक राम्रो बनाउन अस्पताल गइन्, दुबै खुट्टा गुमाएर आइन्
Nextगाउँलेहरुले यो किन बाँचेको होला भनिदिंदा असाध्ययै रुन मन लाग्छ, जस्तो भएपनि मेरो छोरा हो मलाई त अरुकोभन्दा यसैको धेरै माया लाग्छ, (भिडियोसहित)
यो मितिमा रिलिज हुने भयो इरफान खानको अन्तिम चलचित्र
म्यानमारकी चर्चित मोडल पञ्चीले नेपाली मोडल जस्तै आफ्ना यस्ता तस्विरहरु जब सामाजिक संजालमा सेयर गरिन्…..(हेर्नुहोस् पुरा विवरण)
का’टिएको हात खुट्टामा जोडिदिए पछि… (1343)
आजको राशिफल माघ ११ गते आईतबार – पाथिभारा माताले कल्याण गरुन हेर्नुहोस शेयर गर्नुहोस !
एसपी गुरुङको एक्सन : घुस लिँदै गरेका तीन प्रहरी प’क्राउ